Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: dingana mangingina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: dingana mangingina
Niheren-doza ny tontolon’ny kitra. Tsy nandray fanasaziana ny Barea ny sampam-pitantanana an-tampony eran-tany (Fifa) noho ny tsy fahaiza-mitantan’ireo tompon’andraikitra niadidy ny Federasiona Malagasy. Sambany no tafita hikatroka amin’ny fihaonana famaranana fifaninanana iraisam-pirenena ny ekipam-pirenena. Afaka arahabaina tsy maty fo aman’aina ! Nifanindran-dalana tamin’io fotoana io ny korontana niseho tao amin’ ny sampam-pitantanana. Ho an’ny mpitazana eto an-toerana na any ivelany dia adilahy fiadiana toerana no tsy nahafahana nanatontosa fifidianana manara-pitsipika. Nailiky ny Fifa avokoa ny rehetra tao anatin’io sehatra nisehoan’ny fizarazarana sy fitsikombakombana io. Ho solon’izy ireo dia najorony ny sampam-pitantanana vonjimaika izay nanendreny olona efatra.
Taitra ihany ny ankamaroan’ny ambanilanitra indrindra moa ireo ao amin’ny tontolon’ny kitra, sehatra mahazatra anjakan’ny lehilahy, raha vehivavy roa no anisan’ireo olona efatra voatendry mpikambana ao amin’ilay sampam-pitantanana vonjimaika. Tsy vitan’izay fa mbola ny iray amin’ireo roa vavy no natsangany ho filoha. Nisy angamba no azon’ny fakam-panahy amin’ny fiheverana fa mbola fanaovana kiantrano antrano ihany ny fametrahana an’i Béatrice Atallah eo amin’izany toerana izany. Raha dinihina amin’ny saina tsy miangatra anefa, tsy misy antony tokony hanaitra izany afa-tsy ny hoe angamba ny fahatongan’ny andriambavilanitra eo an-tampon’ity tontolo sehatra mahazatra anjakan’ny lehilahy toy ny efa voalaza. Anarana tsy efa faheno mahazatra ve izany Béatrice Atallah izany ? Anatin’ny tadidy ao ny fe-potoana naha Filohan’ny Cenit azy. Tsy adino koa fa efa niandraikitra ny fifandraisana amin’ny any ivelany izy nandritra ny fotoana naha Minisitry ny Raharaham-bahiny ny tenany.
Tsy hitsara ny fomba nanatanterahany ny adidiny teo amin’ izany andraikitra izany, mazava ho azy kosa fa nahazoany traikefa manokana ny fandrariana fifidianana sy ny fikolokoloana ny fikasokasohana amin’ny fahefana iraisam-pirenena sy amin’ ny fitondrana any ivelany. Fanomanana fifidianana manaja ny fitsipika ary fampiravonana ara-pomba ny fifandraisan’ny Federasiona amin’ireo Sampana fitantanana iraisam-pirenena Caf sy Fifa no iraka mipetraka ho taterahan’io Sampana vonjy maika io : tsy «ilay olona ilaina eo amin’ny toerana sy araky ny fotoana ilana azy» ve i Béatrice Atallah ? Raha «eny» no valin’izany, dia mendrika hifaliana, tsy nila fifaninanana ny nahatafidiran’ny vehivavy eo amin’ny sehatra noheverina fa bahanan’ny lehilahy. Santatra ambavarano, mbola ho be ny ao afara eo amin’ny fikatsahana fampitovian-jo.